माग घटेपछि सिमेन्ट सस्तियो, उद्योगी भन्छन्- ३० अर्ब बजारमा फस्यो – Nepal Press
#न्याय र समानता
माग घटेपछि सिमेन्ट सस्तियो, उद्योगी भन्छन्- ३० अर्ब बजारमा फस्यो
२०७८ वैशाख ३ गते १६:२५
काठमाडौं । नेपालमा सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहेको समयमा सिमेन्टको मूल्य भने सस्तिएको छ । चर्को प्रतिष्पर्धा र कमजोर मागका कारण अहिले उत्पादन लागतभन्दा कममा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् ।
अहिले औसतमा पीपीसी सिमेन्ट ६५० रूपैयाँ र ओपीसी ५५० रुपैयाँ कम्पनी मूल्य रहेको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो कम्पनी मूल्य भएको दावी उत्पादकहरूले गरेका छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यूनतम मूल्यमा उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको बताए । नेपालमा विकास निर्माणको काम शुरू हुने समयमा सिमेन्टको मूल्य घटेको उनको भनाइ छ ।
थापाले भने, ‘उद्योगले उत्पादन मूल्यभन्दा पनि कममा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधा जतिले आफ्नो उत्पादन मूल्यभन्दा पनि कममा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् ।’
लकडाउनको समयमा धेरै घाटा भएको र अझै त्यो घाटा बढ्ने अवस्था आएकोले कम मूल्यमा बिक्री गरिएको उनले बताए ।
थापाका अनुसार बजारमा करिब ३० अर्ब रूपैयाँ बाँकीमध्ये उद्योगहरूले आउँदो असारसम्म १२ अर्ब जतिमात्र उधारो उठ्ने आंकलन छ ।
थापाले भने ‘पहिले सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले डिलरलाई बिक्री बढाउन उधारोमा नै सिमेन्ट दिए । अहिले त्यही उद्यारो दिएको पैसा कसरी उठाउने भन्ने चिन्तामा छन् । यस आर्थिक वर्षभित्र १२ अर्ब जतिमात्रै पैसा उठ्ने अवस्था रहेको छ ।’
अहिले उद्योगहरूले कम मूल्य तर नगदमा सिमेन्ट बिक्री गर्ने रणनीति लिएको उनको भनाइ छ । लकडाउनको समयमा उद्योगहरूले दैनिक ६५ करोड घाटा खाएको पनि थापाले दावी गरे ।
उद्योग विभागका अनुसार नेपालमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर, हाल ६५ वटामात्रै सञ्चालनमा छन् ।
थापाका अनुसार लोडसेडिङको बेला नेपालमा सिमेन्टको कम्पनी मूल्य सबैभन्दा उच्च थियो । सो समयमा पीपीसी सिमेन्टको ८०० र ओपीसीको ९०० रुपैयाँ कम्पनी मूल्य थियो ।
पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ । अहिले घाटामा चलेका विभिन्न सिमेन्ट उद्योगले आईपीओ ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
नेपालका सबैभन्दा पुरानो सिमेन्ट उद्योग हिमाल सिमन्ट उद्योग हो । वि.सं २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । तर अहिले बन्द भइसकेको छ ।
त्यसपछि २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको शुरूआत सरकारले नै गरेको थियो । अहिले दर्ता भएका उद्योगमध्ये १ सय २८ वटा सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ ।
सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेको १९ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गर्‍यो । अध्यक्ष थापाका अनुसार नेपालको सिमेन्ट क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब ३ सय अर्ब लगानी रहेको छ । नेपालीले सिमेन्ट उद्योगमा करिब २ सय २० अर्ब लगानी गरेका छन् ।
कसरी फस्यो ३० अर्ब ?
पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्टको उद्योग स्थापना धेरै भए । सिमेन्ट मागभन्दा धेरै उत्पादन हुन थालेपछि बिक्री गर्नका लागि कम्पनीहरूले आफ्ना डिलरहरूलाई उधारोमा नै सिमेन्ट दिएका थिए ।
पहिले सिमेन्ट दिँदा पैसा तिर्ने भाकामा डिलरले सिमेन्ट उद्योगलाई पैसा तिरेनन् । गत वर्ष सिमेन्ट उत्पादक संघले नै आधिकारिक सूचना निकालेर सिमेन्ट उधारो बिक्री बन्द गरेको थियो ।
मोतिलाल दुगड उद्योग राज्यमन्त्रीले मन्त्री भएको बेला उद्योगीलाई पैसा उठाइदिने आशा देखाएका थिए । तर, उद्योगीहरुले भने मन्त्रीले भाषणमात्रै गरेको तर पैसा उठाउनका लागि केही पनि सहयोग नगरेको बताए ।
एक सिमेन्ट उद्योगीले भने, ‘मन्त्रीले उधारो पैसा उठाउन सहयोग गर्ने भन्दा खुसी लागेको थियो । तर, भाषण गरेको करिब १ वर्ष भइसकेको छ । उठाउनको लागि केही पहल गर्नु भएन । हामीले लकडाउनभन्दा अगाडि नै उधारो दिएको सिमेन्टको पैसा उठाउन सकेका छैनौ । लकडाउनको समयमा पनि धेरै घाटा भयो ।’
उद्योगले उत्पादन मूल्यमा बिक्री गरेको सिमेन्टमा डिलरले भाडा र अन्य खर्च जोडेर बिक्री गर्ने गर्छन् । सिमेन्टको मूल्य घट्दा घर बनाउनेहरुलाई भने फाइदा भएको छ ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ३ गते १६:२५
करिब ७९ अंकले बढ्याे नेप्से, नविल बैंकमा बढ्दो आकर्षण
कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु उद्योगका कर्मचारीलाई एक अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह
नविल बैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षक किन, कति दिनसक्ला लाभांश ?
सुनको मूल्य तोलामा २ सयले वृद्धि
तीन महिनामा एनसीएचएलबाट ४१.२ खर्बको कारोबार
बैंक खातामा नगद लाभांश पठाउँदा प्रष्ट जानकारी खुलाउन धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
सेयर बजार परिसुचक नेप्से ८७.६३ अंकले बढ्यो, ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कारोबार